Madaxweynaha Jubbaland oo amaanay Mataaneynta Magaalooyinka Kismaayo iyo Antalya | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR JUBALAND Madaxweynaha Jubbaland oo amaanay Mataaneynta Magaalooyinka Kismaayo iyo Antalya
Madaxweynaha Jubbaland oo amaanay Mataaneynta Magaalooyinka Kismaayo iyo Antalya
Ujeedada socdaalka wafdigan ayaa aheyd indho indhaynta goobo kala duwan oo mashaariic ay ka fulinayaan iyo Barnaamijka mataanaynta Magaalooyinka Kismaayo iyo Antalya oo ah Magaalo ku taala wadanka Turkiga isla markaana meelo badan ay labada Magaalo iska shabahaan.
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in dhamaan waxyaabihii laga wada hadlay ay miro dhal nqodeen isla markana mar dhow ficil loo badali doono.
Madaxweynaha wuxuu amaanay mataanaynta Antalya iyo Kismaayo oo uu xusay in ay tahay qorshe weyn oo ay tahay in mudnaan gaar ah la siiyo.
Sidoo kale Madaxweynaha wuxuu sheegay in wafdigan ay dhawaan tagi doonan meelo kale oo Jubbaland kamid ah oo mashaariic laga fulinayo isagoo amaanay sida Dowlada Turkiga ay uga go’an tahay in taageeradeeda ay gaarsiiso dhamaan wadanka.
Safiirka Turkiga Olgan Bekar ayaa dhankiisa ka mahad celiyay soo dhawayntii qiimaha lahayd ee loo sameeyay isagoo hoosta ka xariiqay in dhamaan waxyaabahii la isku afgartay ay sida ugu dhow u fulin doonaan gaar ahaan adeegyada hormarinta oo ay ugu weyn tahay mataanaynta Magaalada Kismaayo iyo Magaalada Antalya.
Previous articleGuddoomiyaha Gobalka Benaadir oo kulan la qaatey taliyaasha ciidanka
Next articleMadaxweynaha Puntland oo la kulmay wafdi ka socda FAO